Ungene ngendlela engajwayelekile kwezamabhizinisi osenenkampani edayisa izikhwama naphesheya kwezilwandle. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uTlhalefang Moeletsi, umsunguli weMebala, eyenza izikhwama zesikhumba yaseGoli, eGauteng
Ungene ngendlela engajwayelekile kwezamabhizinisi osenenkampani edayisa izikhwama naphesheya kwezilwandle. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUFUNA ancame into ayeyidinga kwamnika umqondo wokusungula inkampani eyenza izikhwama eziyinguganaboya. Insizwa yaseRustenburg, eNorth West, yasungula ibhizinisi lezikhwama ngemva kokungasitholi isikhwama eyayisidinga.
Ukusungula kwayo ibhizinisi kwafeza iphupho elidala. “ngikhule ngazi ukuthi ngizoba wusomabhizinisi uma sengimdala, yize bengingenalwazi lokuthi ngiyophatha hlobo luni lwebhizinisi. Kodwa bekuhlale kubusa umqondo wami ukuthi ngelinye ilanga ngiyoba nebhizinisi elihlonishwayo eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele.
“Yingakho nje kungangithusi ukubona ibhizinisi lami lidlondlobala ngale ndlela ngoba kufezeka into engikhule ngiyifisa vele, yize ukungena kwami kulona kwenzeka ngendlela okungajwayelekile ukwenzeka ngayo kubantu abaningi.”
Usho kanje uMnu uTlhalefang Moeletsi, oneminyaka ewu-29, umsunguli weMebala, okusho imibala ngesiZulu, ibhizinisi elenza izikhwama zesikhumba laseGoli, eGauteng.
Isikhwama sesikhumba esihlula abeshuki seMebala
UMnu uMoeletsi, one-Masters in Economics nokumanje wenza i-PhD in Economics e-University of Witwatersrand, uthi okwenze waqala iMebala, ayisungule ngo-2019, wukucinga aze akhathale efuna uhlobo lwesikhwama olwalumfikele emqondweni.
“Ngacinga kuzo zonke izitolo ezidayisa izikhwama eGoli kodwa ngangaluthola uhlobo lwesikhwama esasingifikele emqondweni. Loko kwenza nganquma ukuqala ibhizinisi lokwenza izikhwama ezihlukile, okungelula ukuzithola kwezinye izitolo.
“Ngibe sengithola abantu ababili abakwazi ukuthunga izicathulo, nokuyibona abangisiza ngaqala ibhizinisi. Senza izikhwama ezihlukene sisebenzisa isikhumba esiqinile,” kulanda yena.
Esinye sezikhwama zeMebala ezikhanga namakhasimende aphesheya kwezilwandle
Ukusimama kweMebala kwenze waheha inqwaba yamakhasimende nokuphoqe ukuthi aqashe izisebenzi ezine ngaphezulu. Manje usenizebenzi eziyisithupha, kanti Izikhwama zeMebala zibiza uR390 kuya kuR5 900.
“Izikhwama zethu ziqinile, zakhiwe ngendlela esezingeni eliphezulu futhi siphinde sibe nezokufaka imali namakhadi asebhange esizakha ngendlela eyenza kungabi lula ukuqolwa yizigebengu ngenxa yobuchwepheshe besimanje esibusebenzisayo.
“Ukubhincisela nxanye izimbangi zethu kufakazelwa wukwanda kwesibalo samakhasimende akwamanye amazwe athenga umkhiqizo wethu, njengoba manje sesinamakhasimende ko-England, eGermany naseMelika.
“Okunye okungisiza kakhulu wukuthi angizixaki ngokwenziwa (yizimbangi). Kunaloko ngigxila ezintweni ezizogculisa amakhasimende ami ngoba yiwona abaluleke ukwedlula wonke umuntu ebhizinisini,” kusho uMoletsi ngeqholo.
Isikhwama semali seMebala okungelula ukusikhuthuza
Njengawo wonke amabhizinisi, nabo bake babhekane nezinselelo zebhizinisi. Uthi: “Isikhumba esisisebenzisayo siyabiza futhi asitholakali kalula, kanti kubuye kube nzima kimi ukugxila ebhizinisini ngoba ngibuye ngixinwe wumsebenzi walapho engisebenza khona nasi nesikole ngapha.”
Uthi ukwenza izifundo zomnotho kumsize kakhulu, kwenza wathola ulwazi oluningi lokuphatha ibhizinisi, waqonda ngomnotho futhi wafunda kuphatha imali ngendlela efanele. “Yingakho nginxusa umuntu omusha ofuna ukuqala ibhizinisi ukuthi azihluphe ngolwazi oluzomsiza adlondlobale kwezamabhizinisi.”
Uthi uzoqhubeka asebenze kanzima ukuze iMebala igcine isizenzela isikhumba sokwenza izikhwama, ibe namagatsha ezweni lonke futhi iqashe intsha engasebenzi.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNqubeko Ndlela, umsakazi weNongoma FM nenxusa leVodacom